အသည်းကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့် လူနာ ရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ရောဂါအရှင်းပျောက်ကင်း သွားတဲ့ ဆေးနည်း – Na Pann San
Na Pann San W | July 3, 2020 | Health | No Comments
အ ရက် အရမ်းသောက် ခဲ့တဲ့ ညီတစ်ယောက် အခုတော့ အသဲ မှာ အနာဖြစ် လို့ ဆေးရုံ ခဏခဏ တက်နေ ရပြီ။ ဆေးရုံတက် ဆေးစစ်လိုက်တော့ အသဲကင်ဆာ တဲ့ ။အ သဲ က င်ဆာဖြစ်နေတဲ့ ညီ အတွက် သူမိသားစု တစ်ခုလုံးက စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်နေ ရပြီ တစ်မိသားစု လုံးလည်း မနားရ ဆေးရုံ တက်တော့ အစောင့်က နှစ် ယောက်စောင့်ရ တယ် ။ သွေးသား ဖြစ်နေတော့ လည်း ရောဂါပျောက်ရေး ဘယ်ဆေးကောင်း မလည်း စုံစမ်းနေရတာ ကလည်း တစ်လုပ်။
ဆေး ရုံ က ခွဲစိတ် ကုသလည်း တာဝန် မယူလို့ အိမ် ပြန်ခေါ်လာရတယ် ဗိုက်ကလည်း မနေနိုင်အောင်နာ တစ်ကိုယ်လုံး ကလည်း ကိုက်ခဲနေတယ် ဆေးထိုးတယ် ထိုးတုံးသက်သာတယ် ဆေးရှိန်ပြေတော့ ပြန်ကိုက်ပြန် တယ် ညလည်း မအိပ်ရ လူနာမ အိပ်တော့ တစ်အိမ် သားလုံးလည်း မအိပ်ရ အိပ်ရေး ပျက်ကြရတယ်။
ဒီ လို နဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ ကင်ဆာ အဆင့်သုံး ဖြစ်ဘူးသူရဲ့ ညီနဲ့ကွမ်းယာဆိုင် မှာ တွေ့ စကားပြောမိတော့ ကင်ဆာဆေးနည်း ရပြီ သူအစ်ကိုက အိပ်ယာထဲလဲနေသည်အထိ ဝေဒနာကို ခံစားနေရသူသူ အစ်ကိုက အခုတော့ ကင်ဆာရောဂါ ပျောက်သွားပြီး လို့ သတင်း ရပါပြီ ရေငတ်နေသူ ရေတွင်းထဲကျ ဆိုသလိုပါဘဲ။
ရှေ့ က လူ နာက လက် တွေ့ပျောက်ထားတယ် ဆိုတော့ အဲဒီဆေးကို ရချင်နေပြီးပေါ့ ခင်များအကိုက ဘယ်ဆေးသောက်လို့ ကင်ဆာရောဂါက ပျောက် သွားတာလည်းလို့ မေးလိုက်ပါတယ် သူကလည်း ပြောချင်နေ သူ မို့ လွယ်လင့်တကူဘဲ ပြောပြပါတယ်ဆေး နည်း ကတော့ လက်ခုတ်သီးနဲ့ စွန်လက် သဲမြစ် သွေးတိုက်တာပါတဲ့ ဆေးနဲ့တည့်ရင် အိပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောလိုက်ပါသေး တယ် သူပြော တဲ့ ဆေးပစ္စည်းတွေကို ရှာပြီးတိုက်ပါတော့တယ်သူ ပြောတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ ဆေးတိုက်တဲ့ညမှာ အိပ်ပါတော့တယ်။
အ ခါ တိုင်း မအိပ် ရသူ အခုတော့ အိပ်ပါပြီ နောက်နေ့ကြတော့ ကိုက်ခဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း မကိုက် တော့ပါ ဒီစာရေးတင်သော အချိန်မှာ လူနာကို ဆေးတိုက်တာ လေးရက်မြောက်ဘဲ ရှိပါသေးတယ်။ လူနာရဲ့အခြေအနေ ထူးခြား သက်သာမှုအပေါ်မှာ ဆက်လက်သတင်းပေး တင်ပြပါ့မယ် ကင်ဆာဝေဒနာကို ခံစားနေရသူများ ဆန္ဒရှိက အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် စေတနာနဲ့ တင်ပြပေးချင်ပါ အောက်ပုံကတော့ လူနာနဲ့ သူ့ကို တိုက်နေသော ဆေးပင် ဆေးမြစ်များ ပါ။
အဖုအကျိတ် လိမ်းတာနဲ့ ပျောက်ပါတယ်….
လက်ခုတ်ခွံကတော့ မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်နားမှာ…
လက်ခုတ်ပင် ရှိပါတယ် လက်ခုတ်သီး ရဲ့ အခွံကို အသုံးပြုရတာပါ….
စွန်လက်သည်းပင် အစစ်ကိုပုံတွင် လေ့လာပါ..
အပင်မှာ စက္ကူ ပန်းပင်လို ပါပဲ….နွယ်ပင်ဆန်
လက်ခုတ်သီးအခွံ နဲ့ စွန်လက်သည်းပင် အမြစ်
အဖု အကျိတ် မှန်သမျှ ဆန်ဆေးရည်နဲ့ သွေးလိမ်းပါ ပျောက်ပါသည်။
မှတ်ချက် . စွန်လက်သည်းပင်အမြစ်သည် တမာခါးသလိုခါးပါသည် …